कसरी आउँछ ‘भिजन सिन्ड्रोम’ समस्या ? केके हुन् लक्षण ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | टेलिभिजन, कम्प्युटरलगायत विद्युतीय उपकरणको बढ्दो प्रयोगसँगै आँखामा देखा पर्ने ‘भिजन सिन्ड्रोम’ समस्या भोग्नेको संख्या बढ्दो छ ।
काठमाडौंंका आँखा अस्पतालमा हरेक दिन यस्तो समस्या लिएर आउने बिरामी बढिरहेका छन् ।
टिभी, कम्प्युटर र मोबाइलको उपयोग गर्दा निश्चित दूरी र समयको हेक्का नराख्दा स्कुले विद्यार्थी र अन्य पेसाकर्मी पीडित छन् ।
नेपाल आँखा अस्पतालका नेत्ररोग विशेषज्ञ डा.नियाज कौसर मिकरानी पछिल्लो समय भिजन सिन्ड्रोम समस्याले पीडित हुनेको संख्या बढिरहेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन, ‘आँखालाई आराम गर्न नदिई लगातार काम गर्नेहरूमा यो समस्या देखिएको छ ।’ आँखाको परेलामाथि ४० वटा र तल्लो भागमा २५ वटा ग्रन्थी हुन्छन् ।
यी ग्रन्थीमा असर पर्ने बित्तिकै भिजन सिन्ड्रोमका लक्षण देखा पर्ने नेत्ररोग विशेषज्ञको भनाइ छ ।
त्रिवि, बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र, महाराजगन्जका कार्यकारी निर्देशक एवं वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ प्राडा आनन्दकुमार शर्मा स्कुले विद्यार्थी, बैंकर्स, कम्प्युटर इन्जिनियर भिजन सिन्ड्रोमबाट प्रभावित भएको बताउँछन् ।
टेलिभिजन, कम्प्युटरलगायतबाट प्रवाह भएको किरणले थकान महसुस गराउनुका साथै आँखालाई सुख्खा राख्ने नेत्र विशेषज्ञको अनुभव छ।
प्राडा शर्मा भन्छन्, ‘रगत प्रवाह गर्न मुटुको चाल र श्वासप्रश्वास फेर्न फोक्सोको खुम्चने र फैलने प्रक्रिया जति आवश्यक छ ।
आँखालाई स्वस्थ राख्न परेला झिम्कनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । टेलिभिजन हेर्ने र कम्प्युटर चलाउनेको आवश्यक मात्रामा परेला झिम्किन पाउँदैन ।
फलस्वरुप भिजन सिन्ड्रोमको समस्याले पिरोल्न थाल्छ ।’ परेली झिम्क्याउँदा आँखामा रहेको तरल पदार्थले नानी (कोर्निया) लाई भिजाई मोइश्चर गराउँछ ।
नेत्ररोग विशेषज्ञका अनुसार नानीलाई मोइश्चरमा राख्दा भिजन सिन्ड्रोमको डर हुँदैन । सामान्यतया एक मिनेटमा १५ पटक परेली झिम्कनु सामान्य मानिन्छ ।
टेलिभिजनको दृश्य हेरिरहेका बेला र कम्प्युटरमा काम गरिरहेका बेला परेली ६ देखि ८ पटक झिम्कने डा.शर्माको भनाइ छ।
उनी थप्छन्, ‘निदाउँदा परेली छोपिनुपर्छ भने ननिदाउँदा आँखा निरन्तर झिम्किरहनुपर्छ । टेलिभिजन हेर्दा होस् वा कम्प्युटरमा काम गर्दा दूरी र समयको ख्याल गर्नुपर्छ।’
वातानुकूलित कोठामा बसेर टेलिभिजन, कम्प्युटर र मोबाइल चलाउनेहरू बढ्दै गएका छन्। यो बानीले झन् भिजन सिन्ड्रोमको समस्यालाई वृद्धि गराउने चिकित्सक बताउँछन्।
एसी वा हिटरको प्रयोग गरी यी सामग्री चलाउँदा पनि आँखा सुख्खा गराउन सहयोग पुग्छ। युट्युबबाट अध्ययन गर्ने चलन बढेकाले भिजन सिन्ड्रोमको समस्या झन् वृद्धि हुने नेत्ररोग विशेषज्ञको आकलन छ।
७ घन्टाभन्दा बढी समय टेलिभिजन हेर्ने वा कम्प्युटर चलाउनेलाई यो समस्याले पिरोलिरहेको पाइएको छ। आँखा झिम्कने प्रक्रिया रोकिनेबित्तिकै आँखामा तरल पदार्थ उत्पन्न हुँदैन।
तरल पदार्थले भिजाएर चिसोपना राख्नुपर्नेमा आँखा मोइश्चर नभई सुख्खा हुन पुग्छ। दृश्य हेर्न सहयोग र्पुयाउने नानी सुख्खा हुँदा लेयर हट्छ ।
दृश्य धमिलो देखिने, आँखा चिम्म गर्दा आनन्द महसुस हुने हुन्छ। त्यस्तै, टाउको दुख्ने। काम गर्दा अल्छी लाग्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन्।
लगातार काम गरिरहनुको साटो बीचबीचमा आराम गर्ने, स्वच्छ पानीले बारम्बार आँखा सफा गर्ने, बाहिर टहलिने र पानी पिउनुपर्ने डा.शर्माको सुझाव छ ।
त्यस्तै, आँखालाई आराम दिनुका साथै आँखाको आवश्यक कसरतसमेत गर्नुपर्ने डा.मिकरानी बताउँछन् ।
कृत्रिम रूपमा तरल पदार्थ निस्कने औषधि राखेर भए पनि आँखामा चिसोपना गराउनुपर्ने सुझाव चिकित्सकको छ ।